Wax-baridda iyo wacyi-galintu waa furaha hirgalinta iyo fulinta sharciga
By ibrahim Aden shire August 16, 2017
Dowlad walba oo aduunka ka jirto ama horay usoo martay masuuliyadda kowaad ee saaran waa ilaalinta danaha iyo maslaxada shacabkeeda. Si loo xaqqiijiyo hadafka aan soo xusnay waxaa la soo saaraa sharciyo kala duwan oo lagu qaado kuwa dhibaateyo shacabka iyo nidaamka ay ku nool yihiin. Sharciyadaan inta badan waa ciqaab la mariyo xad-gudbayaasha, waxayna noqon karaan xabsi, ganaax ama dil.
sharciyada waxa loo soo saaro maahan in dadka la ciqaabo ee waa in laga hortago, la joojiyo ama la yareeyo xad-gudubyada ay gaysanayaan. Sidaa darteed ujeedku waa in helo nabad iyo nolol shiddo iyo dhib la'aan ah. Balse su'aashu waxay tahay sidee ugu fudud oo lagu xaqqiijin karaa hadafkaas? ciqaabka oo la adkeeyo xal waara ma keenaa? ma jiraan wadooyin ka sahlan oo lagu joojin karo gar-darrada?
Eebe wuxuu soo dajiyay Qur'aanka kariimka oo loogu talagalay aadanuhu inay ka qaataan sideey u noolaan lahaayeen. waxaa lagu cadeeyay wadooyinka ay tahay in la raaco, waxa banaan iyo waxa la reebay iyo sida loo ciqaabayo kuwa jabiyo sharciyadda dowladda.
Qur'aanka aayadihiisa kaliya maahan kuwa tusaaleeyo ee qaabka loo soo dajiyay iyo nidaamka uu ku socday ayaa qudheedu wax barid iyo tusaale ah loogu talagalay in la raaco. Tusaale, waxyigu wuxuu dagayay 23 sano. Tobanki sano ee hore dadka wax barid iyo wacyi galin ayay ku jireen. waxaa la toosinayay caqiidadooda. waxaa la kala barayay samaanta iyo xumaanta. waxaa lagu beerayay jeceylka nidaamka islaamiga ah iyo u hogaansanka sharciga.
Inta howshaasi socotay marnaba laguma soo qaadin kan waa xaaraam ee joojiya. wax walba sidii ay awal u ahayd ayay u wateen. Sababtu waxay ahayd sharci lama hir galin karo haddii dadku aysan ku qanacsanayn.
Hooyadeen Caaisha waxay leedahay "Qur'aan waxaa loo soo hor dajiyay subac Khamiisaad (afarta juz ee hoose). dhamaan suuradahaan kuma jirto mid ka hadashay xalaal iyo xaraam. haddii lagu dhihi lahaa waxaa waa xaraame daaya waqtiyadii hore waxay oran lahaayeen dayn mayno".
Marki la hubiyay inay bislaadeen, iimaanku maankoodu dagay, wadaniyadda iyo u hogaansanka madaxda ay ku weyn tahay ayaa lagu bilaabay in lagu yiraahdo kanaa idiin banaan kanna waa idinka reeban yahay. ka dib wareer la'aan iyo shiddo la'aan ayay qaateen.
waxay leedahay hooyadeen Caaish "Allaha u naxriisto haweenka Ansaareed. marki ay soo dagtay aayada xajiaabka waxaan arkay iyagoo mar qur ah isku boobay hagoog. waxaan arkay iyadoo qaarkood inta waayeen waxay wajiga ku xirtaan maryahooda faygooda jeexday oo indho-shareer ka dhigtay".
sida ka muuqato halkaas sharciga fulintiisu kaliya wuxuu ku xirnaa in la sheego oo yiraahdo 'waxaas ayaa la iska rabaa'. ma muuqato boolis wadooyin lagu daadiyay si u hubiyaan meel marinta sharciga mana muuqato xabsiyo loo sameeyay kuwa u hogaansami waayo sharciga.
Marki uu Abuu-Bakar allaha ka raali noqdee khilaafada qabtay ayuu Cumar u magacaabay inuu noqdo qaaliga Madiino. marki Cumar muddo xilki hayay ayuu ku soo noqday madex-weynihiisi kuna yiri "shaqo ayaan u baahanahay. inaan shaqeeyo ayaan rabaa ee inaan meel iska fadhiyo ma doonayo. Reer Madiino qaalli uma baahna. waa meel qof walba xaqqiisa yaqaan, waxa lagu leeyahayna yaqaan sidaa darteed ma jirto labo is qabato oo loo kala gar-qaado".
Haddii aad tiraahdo kuwaas waa saxaabadi aduun kale ayay noolaayeen ee midka aan ku noolnahay ul iyo baaruud mooyee dadkaan si kale wax kuma maqlaan aan ku siiyo tusaalooyin kale.
Wadanka Maraykanku wuxuu aaminsanyahay in xoog kaliya sharicga lagu ilalin karo. Boolisku hub culus ayuu siddaa. wuxuu amar u qabaa inuu toogto qof walba oo ay u arkaan inay munaasib tahay in la toogto. Boolisku waxay dileen 590 qof oo shacab ah lixdii bilood ee sanadkaan u horaysay (janaayo-Juun 2017). Sidoo kale tirida uu dilay booliska Ingiriiska muddo 24 sano ah iyo waxaa isla ekkaaday tirada uu booliska Maraykanku dilay 24ki bari ee u horaysay sanadki 2015ki.
Sidoo kale, xabisyadu waa buux dhaafeen. Sanadii 2013ki waxaa xabsiyadaha gudahooda ku jiray 2,220,300 (labo milyan, laba boqol iyo labaatan kun iyo sadex boqol) oo qof oo da'doodu ka weyn tahay 18 sano. Dadkaan waa kuwa la xukumay oo ay tahay inay xabsi maraan. Sidoo kale waxaa xabsi banaan joog ah (parole/suspension) ku jiray 4,751,400 (afar milyan, todobo boqol iyo konton iyo kow kun iyo afar boqol) taaso wadarta ka dhigayso 6,851,000 (lix milyan sideed boqol iyo konton iyo kow kun).
waxaan oo dil iyo xabsi ah wax nabad ah maraykan uma keenin. wuxuu noqday wadanka ugu ammaan xun wadamada reer Galbeedka. Maalin walba waxaa lagu dilaa magaalada New york oo kaliya cel-celis 11 ruux oo ay dhagar-qabayaal dilaan. shacabku waa cabsi ku nool booliskuna waa keeb la yuurur.
Garab dhig wadanka Norway. Booliska hub looma ogola marki laga rebo kuwo gaar ah, iyagu naftoodu qof iskama toogan karaan. sanadki 2015ki oo dhan booliska Norway wuxuu riday 2 xabadood oo kaliya iyaguna cidina wax kuma noqon.
Sanadki 2014ki waxaa xabsiyada Norway ku jiray 4000 (afar kun oo qof) oo kaliya. dadkaan xataa xabsiga aynu naqaan kuma jiraan waxay dagan yihiin guryo caadi ah oo u gooni ah. kaliya xorriyadda ay banaanka ku aadi lahaayeen ayaa laga qaaday. Xoriyada waxaa loogu soo celiyaa si tartiib-tartiib ah ugu danbayna isagoo xabsiga dagan ayuu shaqo aadi habaynkina issa soo xiri. xabisiga waa Norway guryo tarbiyo iyo wax-barid ee maahan god ciqaabeed sida kuwa maraykanka iyo soomaaliya oo kale.
Tani waxay keentay inay Norway noqoto wadanka ugu danbiyada yar dalalka reer Galbeedka. 448 jeer ayay ka danbi yartahay Maraykanka.
Sababta ugu muhiimsan ee keentay guusha ay gaartay Norway ayaa ah inay dowladu aaminsantahay haddii uu ruux danbi galo qaladka dowladda ayaa iska leh waayo waxay ahayd inay dowladu wax ka qabato arinta ruuxaan falkaan ku xambaartay. Dowladu waxay xoogga saartaa inay shacabkeeda barto xaqqooda iyo meel ay u doontaan waxa ka maqan.
Qulaasada hadalka ayaa ah xoog iyo ciqaab dad laguma tarbiyeeyo. fal-danbiyeedka oo la yareeyo wuxuu u baahanyahay shacabka oo la wanaajiyo iyo in la baro wadooyinkooda. wuxuu u baahanyahay wacyi galin joogta ah iyo barida cawaaqibta ka dhalan karto fal-danbiyeedka ay galayaan.
Gaar ahaan innagu wadankeenu 30 sano ayuu nidaam la'aan ahaa. shacabka hadda joogo ma yaqaan sharci iyo dhowridiisa toona. wuxuu kusoo jiray muddo badan oo ah "ninkii xoog lahoow xabagta gooso" sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah in waqti badan iyo qarash badanba la galiyo waano iyo wacyi galin ka hor inta aan dadka xabsiyada laga buuxin ama aan gacmaha laga jarin.
Qof aan aqoon sharci waxa uu yahay marnaba ka cabsan mahayo lagana sugi mahayo inuu ilaaliyo. Horaa loo yiri "Libaax nimaan aqoon ayaa lax ka ritto"